Aluminium aluminium ah oo loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Aluminium aluminium ah oo loogu talagalay warshad la taaban karo
Mabda'a dalabka o ...
Aluminium aluminium ah ayaa soo saaray ...
Tilmaamaha kaydinta ...
Baaxadda codsiga ee ...
Waxsoosaarka caadiga ah ee wax soo saarka, oo sanadkii la soo saaro ilaa 15,000 tan. Si loo daboolo baahiyaha macaamiisha, waa la keydin karaa lana rari karaa wakhti kasta. Gaarsiinta degdegga ah iyo waxtarka sare.
Aaladda la taaban karo ee la taaban karo waa nooc cusub oo ka mid ah qalabka dhismaha oo leh miisaan khafiif ah, dabacsan, kuleyliyaha kuleylka, u adkeysiga dabka wanaagsan, nailalka, miinshaarrada, qorshaynta, iyo iska caabin dhulgariir gaar ah.
Qaabkii hore ee soosaarka budada aluminiumku wuxuu ahaa "habka feedhka", oo hadda habka wax lagu shiido kubbadda ee loo yaqaan "wax soo saarka qalalan" ayaa si ballaaran loo isticmaalaa.
Badeecadani waa badeecad koollo ah oo ay ku jiraan wakiil dareere ilaaliya, oo ah qaab qolof qoyan, waxayna ka kooban tahay antioxidants gaar ah iyo aaladda faafisa.
Saameynta budada aluminium ku leedahay shubka hawada ku jira
Heerka dhalinta hawada, xawaaraha dhalinta hawada, cabirka walxaha, iyo cufnaanta dabacsan ee budada aluminiumka ayaa saameyn weyn ku leh waxqabadka shamiitada hawada ku jirta.
Mabda'a dalabka ee aluminiumka koollada budada ah ee la taaban karo
Aluminium waa bir aad u firfircoon, waxay ku falcelin kartaa biyo si loogu beddelo hydrogen-ka biyaha ku jira isla markaana loo soo saaro alumina xoog leh